DOWNLOAD IRIS फा-20 Tigershark FSX र P3D - Rikoooo
डाउनलोड 22 056
सिर्जना 03-08-2012 06: 42: 57
परिवर्तन 15-10-2012 23: 08: 58
यो IRIS फा-20 Tigershark IRIS पुराना उत्पादनहरु को एक एक शानदार नयाँ rendition छ। मूल Tigershark यो नयाँ संस्करण यो एउटा ब्रान्ड नयाँ रुप दिन्छ, 2004 फिर्ता विकास गरे।
तल र सुविधा ब्रान्ड नयाँ उडान मोडेलिंग, अडियो र नयाँ भर्चुअल ककपिट गर्न शीर्ष देखि Remodelled, यो उत्पादन समतल बाहिर, पूर्ण भल्ब मजा लागि डिजाइन गरिएको छ!
विमान एक 'के भने' उत्पादन रूपमा डिजाइन गरिएको छ, एफ-20 अवधारणा वरिपरि आधारित यो सेवा गएका थिए।
एक अद्वितीय अन्य प्रबन्धक तपाईं ठ्याक्कै तोपें तपाईं आफ्नो आदेश मा पूरा गर्न इच्छा चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
360 डिग्री ध्वनि टर्बाइन ध्वनि स्टूडियो देखि एक शानदार soundset FSX लागि विशेष अनुकूलित panning।
पाँच विशेष दृश्य मोडेल मा सबै भन्दा राम्रो कला शानदार weathering र दृश्य स्पष्टताको लागि उपलब्ध अनुमति प्रविधी को प्रयोग गरेर बाह्र भन्दा शानदार paintschemes को विकल्प।
जमीन देखि डिजाइन एक शानदार उडान मोडेल airframe मच2+ गति सक्षम उड एउटा स्थिर र आनन्द प्रदान गर्न अप।
3D afterburner सार्दा संग फा-20 चुस्त मा निकास vectoring पूर्णतया 3D thrust!
तपाईं IRIS फा-20 Tigershark प्रणाली र विमान उपकरण बिरामी, चेकलिस्ट र थप पूरा सञ्चालन गर्न जान्नु आवश्यक छ सबै जानकारी एउटा गहिराई मा पायलट पुस्तिका।
भिडियो फा-20 Tigershark - Grand Canyon गठन उडान
IRIS फा-20 Tigershark FSX र P3D डाउनलोड
डाउनलोड:9431
डाउनलोड: 50 040
डाउनलोड:4242
डाउनलोड: 35 471
डाउनलोड: 40 885
डाउनलोड: 32 164
IRIS फा-35B बाङ्गो तलवार FA.2 FSX र P3D
डाउनलोड: 26 351
डाउनलोड: 78 600
डाउनलोड:9262